‘Ogeeyyiin miidiyaa torbee dura hidhaman eessa akka jiran hin beekamu’ – Kichuu
HomeAfaan OromooNews‘Ogeeyyiin miidiyaa torbee dura hidhaman eessa akka jiran hin beekamu’
‘Ogeeyyiin miidiyaa torbee dura hidhaman eessa akka jiran hin beekamu’
Torban tokko dura dhabbilee miidiyaa lamma irraa to’annoo jala kan oolan oggeessonni miidiyaa eessa akka jiran akka hin beekamne abukaatoon isaani himan.
(bbc)—Ogeessotni miidiyaa kunneen erga to’annoo jala oolanii torban tokko ol ta’us hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaannee fi eessa akka jiran maatiin isaanii baruu akka hin dandeenye abukaatoon isaanii Obbo Taaddalaa Gabramadihin BBCtti himaniiru.
Miidiyaa Yuutubii irratti hundaa’e Itiyoo Fooram jedhamu keessa gaazexeessitoonni hojjataniifi hojjattoonni Wiirtuu Miidiyaa Awuloo qondaaltota poolisiin to’annoo jala ooluun isaanii gabaafamuun isaa ni yaadatama.
Mirga gaazexeessitootaaf kan falmu CPJ’n to’annoo jala ooluu oggeesota kana irratti ibsa baaseen, mootummaan gaazexessitootaafi ogeessota miidiyaa to’annoo jala olche hatattamaan akka gadhiisu fi namoota hojii miidiyaa keessa jiran irratti dhiibbaa uumu akka dhaabuuf gaafateera.
Mudde 23/2013 irratti poolisiin Wiirtuu Miidiyaa Awuloo Finfinnee jiru humnaan seenuun hojjatoota wiirtichaa 12 to’achuu isaa namoota dhiyeenyatti dhimmicha beekan irraa dhaga’uu CPJ’n ibseera.
Haala wal fakkaataan Yuutuubii irratti chaanaalii Itiyoo Fooram jedhamu irratti gabaasa kan dhiyeessan oggeessonni miidiyaa Ababaa Baayyuu fi Yayasaw Shimalis jedhaman poolisiitiin to’annoo jala ooluu isaanii ibseera.
Abukaatoon isaanii Obbo Taaddalaa, ogeessonni miidiyaa kunneen to’annoo jala kan oolfaman poolisii federaalaan akka ta’eefi yeroo to’annoo jala oolfamanitti naannaa Meeksikoo jedhamee beekamutti Wajjira Poolisii Feederaalaa argamutti geeffamuu isaani himeera.
Ogeeyyii miidiyaa hidhaman keessaa Baqaaluu Alaamirroo (Awlo Media) fi Abbebe Baayyuu (Ethio-Forum)
“Hanga Jimaataatti (Mudde 25/2013) maatiin isaan dubbisaafi nyaata geessaafii turan. Sana booda garuu ‘gadhiifamaniiru as hin jiran’ jedhamani. Maatiin isaan argachuu hin dandeenye. Mana murtiittis hanga ammaatti hin dhiyaanne,” jechuun dubbataniiru. Ogeessoti midiyaa kunneen mana murtiitti akka isaan hin dhiyaannee gochuu irra darbe maaliif akka to’annoo jala oolfaman akka itti hin himamne Obbo Taddalaan ibsaniiru. “Wa’ee hidhamuu ogeessota kanaa irratti poolisiin gaaffii miidiyaa haawaassummaa tokko irratti dhiyaateef, kan isaan hidhaman gartuu shorokeessaa waliin hidhata wan qabaniifi jechuun deebii kennuu isaa dubbiseera. Isaan alatti garuu nuuf ifatti nutti hin himamne,” jedhan.
Dhimma kana irratti poolisii federaalaa irraa deebii argachuuf yaallus nuuf hin milkoofne. Oggeessotni kunneen kan to’annoo jala oolan hojii miidiyaa isaanii waliin sababa wal qabateeni jechuun akka amanan abukaatoon kun ni himu. “Maatiin hedduu dhiphatanii gara komishinii mirga namoomaa deemuun iyyata galchatanii ture. Wiixataa fi Kibxata mana murtiitti ni dhiyaatu jedhamnee eegaa turre garuu utuu hin dhiyaatiin hafaniiru,” jedhan. Akka seera biyyattiitti akka barbaadan to’annoo jala olchuun jiraachuu hin qabu ture kan jedhan abukaatoon kun, maamiltoonni isaanii to’annoo jala oolanii sa’aatii 48 keesatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu ture jechuun seerri biyyatti hojiirra hin ooliin hafeera jedhaniiru.
Akka Garaa Osoo Hin Ta'iin Akka Baraatti Bulu! Feyisa Lilesa Gemechu
Akka Garaa Osoo Hin Ta'iin Akka Baraatti Bulu! Dubbiin Akka Gaafa rakkinaa Sana Ta'uu,Diddee Namni…
ABOn akka hin baqnee fi akka hin bannetti Handhuurame gaafa hundeeffame. HDn ABO Jaal Daawud…
Prezidaantiin Somaaliyaa Akka Beelli Deebi’ee Biyyattii Hin Mancaasne
Prezidaantiin Somaaliyaa Akka Beelli Deebi’ee Biyyattii Hin Mancaasne Dhorkuuf Biyyoota Naannoo Gargaarasa Gaafatan (VOA Afaan…
Waraanni PP Shamarran Oromoo 3 Ajjeessu fi Haala Barattoota Yuun. Maqalee